Nhau - Kurwisa Epidemics, Kununura Nguva!
Kurwisa Epidemics, Kununura Panguva!
Tatarisana nekuparuka kwedenda remanyoka ecoronavirus, vashandi veSHEHWA vari kutora matanho akakosha ekuvimbisa "Zero chirwere chemhosva", uye vachiedza nepose pavanogona napo kutumira nguva.
PaMarch 5, 2020, batch yeTS160-3HW bulldozer yakatumirwa kumusika weSoutheast Asia nenguva. Musi waFebruary 3, 2019, iyo SD6KLGP hydrostatic yekutyaira bulldozer inogadzirwa inosanganisa kune izvo zvinodikanwa zvinopihwa nemutengi zvakapihwa kune vanoshandisa-vekupedzisira veSoutheast Asia musika.
SD6K ndiyo track-mhando yakazara hydraulic bulldozer ine semi-rigid yakaturikwa, zvemagetsi kudzora tier Ⅲ, maviri-maseketi emagetsi kutonga hydrostatic kutyaira system, yemagetsi kudzora yakavharwa nzvimbo mutoro kutumira kushandisa hydraulic system.
SHEHWA inoshandisa iyo sainzi & tekinoroji chirongwa chitsva zvinoenderana neyakaganhurirwa zano re "Kugadzira, Kudzidza, Tsvagiridzo, Kuziva", kugadzirisa uye kupaza kuburikidza nehunyanzvi hwekutengesa, kunatsiridza kugona kwekugadzira uye lever zvakanyanya. Muna 2011, SHEHWA yakagadzira nyika yepamberi yemagetsi hydraulic control SD7K
bulldozer, SD9 bulldozer inowana iyo National Yakakosha Zvitsva Zvigadzirwa Chitupa uye Dunhu Sayenzi neTekiniki Mipiro. SD8 bulldozer inowana iyo International Standard Kubvumidza Chitupa. SD8 land reclamation bulldozer inozadzisa iyo Hebei dunhu Metallurgy Sayenzi neTekinoroji Mubairo.
SHEHWA inonamatira kune yekushambadzira uzivi: "Yakatarisana nemisika, ichitarisa vatengi seyakadzika", inoshandisa yakavhenganiswa mashandiro & manejimendi modhi inovhara bhizinesi, zvikamu zvekuchengetedza uye masevhisi, kumisikidza inokurumidza kupindura mashandiro ane yakakwira kushanda kushanda, kukurumidza masevhisi. SHEHWA yakagadzika matavi anopfuura makumi matatu muChina, uye yakagadzira kudyidzana kwenguva yakareba pamwe nekubatana nevatengesi vanopfuura makumi mashanu. Iyo yekushambadzira & sevhisi network inovhara nyika yese, zvigadzirwa zvinoita zvakafanana, uye kutumirwa kuRussia, South-America, Africa, Middle-kumabvazuva nharaunda nezvimwe, zvinopfuura nyika makumi mapfumbamwe nematunhu, uye yakavaka yakareba-refu yakarongeka & kudyidzana kudyidzana ne vatengesi vemuno.
SHEHWA ichatevera musimboti wehurongwa hwese, sequentially & zvishoma nezvishoma kuendesa mberi, kurongeka kuri kusimukira, kusimudzira zvakanyanya kuvandudzwa kwemaindasitiri mashanu anosanganisira mukugadzira michina, michina yekuchera, metallurgia & nharaunda-inodzivirira michina, kukanda & zvakakosha zvikamu, simbi yakadzika-kugadzirisa etc., uye ita nhamburiko huru kuumba SHEHWA ichiva yazvino michina yekugadzira bhizinesi ine chinzvimbo chekutungamira-epamba, epasi rese kirasi, yakabatana neinjiniya, michini yemigodhi, metallurgia & nharaunda-inodzivirira michina.
SHEHWA inoomerera kune bhizinesi uzivi hwe "Gadzira kukosha kwevatengi" kuzadzisa zvashure-zvekutengesa masevhisi.